अरु कर्मचारी ५ घण्टा काम गर्दैनन् तर , कुलमान १४ घण्टा काम गर्छन् त्यसैको प्रमाण हो आजको झिलिमिली नेपाल – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/अरु कर्मचारी ५ घण्टा काम गर्दैनन् तर , कुलमान १४ घण्टा काम गर्छन् त्यसैको प्रमाण हो आजको झिलिमिली नेपाल
अरु कर्मचारी ५ घण्टा काम गर्दैनन् तर , कुलमान १४ घण्टा काम गर्छन् त्यसैको प्रमाण हो आजको झिलिमिली नेपाल
काठमाडौं । कुलमान घिसिङले सारा मुलुक झलमल्ल बनाएका छन् । यसका लागि उनले घामको उज्यालो त्यागेका छन् । अर्थात उनको ज्यानमा घामको न्यानो पर्दैन । किनभने, दिनभर उनी कार्यलय/कार्यक्षेत्रमा खटिएका हुन्छन् । घाम ताप्ने फुर्सद हुँदैन । यही कारण उनको शरीरमा ‘भिटामिन डी’को कमी छ । कुलमानले सुनाएका थिए, ‘कहिलेकाहीँ चिकित्सकले भिटामिन डीको औषधी सेवन गर्नुपर्छ भन्छन् । अरु त खास समस्या छैन्।
कुलमानको दैनिकी कसरी बित्छ ? खाने–पिउने तालिका के छ ? कुनबेला उठ्छन्, कुनबेला सुत्छन् ? धपेडी र दबावबीच गुज्रने दैनिकीबीच आफूलाई कसरी ‘फिट एन्ड फाइन’ राख्छन् ? कुराकानीमा कुलमान भन्छन्, ‘कामको चापले गर्दा धेरैजसो समय कार्यलयमा बित्छ । घुम्ने, रमाइलो गर्ने, भोज भतेरमा जाने फुर्सद बिरलै मिल्छ ।’
कुलमान घिसिङ राति घर पुग्ने टुंगो हुँदैन । कहिले कार्यकक्षमै १० बज्छ । घर पुग्दा प्रायः सुनसान हुन्छ । सबै सुतिसकेका हुन्छन् । चिसो गाँस टिप्छन् । यस्तो, उस्तो खाने भन्ने छैन । घरको भान्सामा जे पाकेको छ, त्यही खाने हो । दिनभरको कामको धपेडी, थकानसँगै उनी ओछ्यानमा घुस्रन्छन् । गहिरो निद्रा पर्छ ।
घर फर्केपछि नुहाउँछन् । त्यसपछि कालो चिया पिउँदै दिनभरको सेड्युल तयार गर्छन् । त्यसपछि हल्का नास्ता लिन्छन् र घरबाट बाहिरिन्छन् । कार्यालयमा पाइला टेकेपछि उनको स्मृतिबाट घर–परिवार, आफन्त सबै हराउँछन् । उनी आफूलाई समेत भुल्छन् । दिनभर काममै दत्तचित्त भएर खटिन्छन् । बाँकी रहेको काम रातभर बसेर भए पनि सिध्याउँछन् । उनको यही कामप्रति इमान्दारी, लगनशीलता र जुझारुपनले त हो नि देश झलमल्ल भएको ।
ओली सरकारकै घोर अपमान कारण राजा आऊ देश बचाऊ कम्युनिस्टहरुले नै भनिरहेका छन